Silahlekelwe sonke – Umyalezo wenduduzo – Bayede News
Ngale mpelasonto kuzobe kufihlwa iNkosi Velemandleni
INkosi yakwaSanguye uMshongozi Biyela eguqile Isithombe: Sithunyelwe
Ngale mpelasonto kuzobe kufihlwa iNkosi Velemandleni Biyela. iNkosi yesizwe sakwaSanguye, indawo eyayaziwa ngokuthi yiKwaYanguye, eMthonjaneni, eMelmoth. Kuleli sonto eledlule, imiyalezo ilokhu ingene njalo emva kokudlula emhlabeni kweNkosi yaseNdlunkulu. Okungihlabe umxhwele yizingcingo engizitholile zivela kozwakwethu engangifunda nabo ngeminyaka yangowe-1987 esikoleni iNqaba Primary School kanye naKwaYanguye Secondary khona eMthonjaneni.
Bonke ebebengithinta, yize sekuphele iminyaka engaphezu kwengamashumi amathathu ngabagcina, bebefisa ukwazi ukuthi ngizwile ngokuhamba kweNkosi yethu. Bonke abafowethu nodadewethu bebekhumbula iqhaza iNkosi eyalibamba ekuphuculeni impilo yabo – njengoBaba wesizwe.
Kuyiqiniso ukuthi iNkosi ibinobuhlakani obujulile futhi ibambe iqhaza elikhulu ekuqinisekeni ukuthi siziphatha ngobuqotho ngesikhathi sisakhula. Yaqinisekisa ukuthi kunozinzo emphakathini futhi yakubeka eqhulwini ukuthuthukiswa kwezemfundo.
Mina nje ngahlomula kakhulu kwazise ukuthi, ukudlula emhlabeni kukababa ongizalayo kanye nodlame lwezepolitiki olwaludla lubi eThekwini, ikakhulukazi eMlaza lwenza ukuthi abazali bami bathathe isinqumo sokuthi ngikhule ngaphansi kwesizwe saKwaSanguye.
Engxoxweni engike ngaba nayo noqweqwe lombhali wezomlando namasiko engangifunda naye, uMkhanyiseni Maswidi Mbatha, wakhona KwaSanguye, sikhumbuzane okuningi esadlula kukho nesakufunda eNkosini yethu.
UMbatha uyakuveza ukuthi iNkosi izalwe ngowe-1938. Izalwa yiNkosi uKhishwekhaya kaNgangezwe kaBhulangethe kaMagidi kaMenziwa kaXhoko kaNdaba. Unina oyizalayo uMaMpungose waseSaholeni ,eMthonjaneni. INkosi ikhothame isineminyaka engama-81 obesekuyenza ibe ngenye yaMakhosi amadala esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ibisibuse iminyaka engama-38 njengoba yathatha isihlalo soBukhosi ngonyaka we-1981.
Ngesikhathi sowe-1984/85 iNkosi yayisebenzisana kakhulu noMfundisi u-Alpheus Sibiya webandla iPentecostal Holiness Church, eyamjuba ukuba abe nguSihlalo woMkhandlu wabazali esikoleni iNqaba kanye neYanguye. Kuzokhumbuleka ukuthi uMfundisi uSibiya kanye noMfundisi uKynock Sibiya, bayalelwa nguMfundisi uWilliam Cullen Wicox kanye noNkosikazi wakhe u-Ida Belle Wilcox ukuthi bavule isonto iPentecostal Holiness Church elinegatsha khona KwaSanguye. Umndeni wakwaWilcox yiwona owakhulisa uMengameli we-ANC uJohn Langalibalele Dube.
Ukusebenzisana kukaMfundisi Sibiya kanye nothisha omkhulu waseNqaba uMnu uMagidi Biyela kanye noMnu uMahaye waseYanguye Secondary kwenza ukuthi lezi zikole zombili zikhiqize abafundi asebakhula babamba iqhaza emikhakheni eyahlukahlukene.
Ezemidlalo, ukuziphatha ngenhlonipho, ukwazisa amasiko yikhona okwakuhamba phambili entsheni futhi lokhu kwenza ukuthi yize kwakunzima ngaphansi kukaHulumeni wobandlululo kodwa isizwe sihlale sibumbene.
Selokhu kube nentando yeningi, iNingizimu Afrika ihlonishwa umhlaba wonke jikelele ngenxa yabaholi abaningi abanohlonze abavela emikhakheni ehlukahlukekene.
Kungaba ezamabhizinisi, kupolitiki, kuHulumeni, kanye nezinhlangano zemiphakathi. Kufanele ngaso sonke isikhathi sikhumbule ukuthi abaholi bezendabuko babambe iqhaza elikhulu kakhulu ukukhiqiza laba baholi esengibabalile.
Ngiyakhumbula ngesikhathi kuqala ngqa ukuthi kukhethwe oHulumeni Bendawo ngeminyaka yowe-1996, INkosi uBiyela yagcizelela ukuthi ukusimama kwentando yeningi kuncike kakhulu ekutheni bukhona yini ubudlelwano phakathi kwezikhungo ezehlukahlukene zobuholi kanye nobuholi obukhethwe ngabantu.
Yagcizelela ukuthi ubuholi obukhethwe ngabantu kufanele ngaso sonke isikhathi bube nezinhlelo ezizoqhakambisa ukusebenzisana kwabo bonke ubuholi obukhona ukuze kuthuthukiswe impilo yabantu. INkosi yethu esikhotheme, ibisondelene kakhulu neNdlunkulu. Isikhathi esiningi ibivamisile ukuthi ihambisane neSILO uma kunemihlangano ebalulekile.
Umcimbi omkhulu wokugcina ngaphambi kokuba iNkosi yethu idunguzele yilapho eyethula khona iSILO. Lo mcimbi wawungomhla zili-11 kuNhlaba eShowe kanti kwakuvulwa khona ihhotela i-Aloe Lifestyle. Kulo mcimbi, intokazi encane eyayengamele ukwakhiwa kwaleli hhotela, yakhula ngaphansi kwayo iNkosi uBiyela. Le ntokazi yaqhakambisa ukuthi izimfunduso ezinhle eyazithola eNkosini yizona ezenza ukuthi ibe nenhloso yokubamba iqhaza elikhulu ukwakha isifundazwe esiphumelelayo.
Bekuvamisile ukuthi uma ithula inkulumo, iNkosi igcizelele lokhu okuhlale kubekwa phambili yiSILO. Ibihlale iveza ukuthi iSILO sihlale sigcizelela lokhu okulandelayo:-
–Kasikhuthaze ukuhloniphana nokuzihlonipha, sazise abantu bonke, hhayi abakithi kuphela, futhi senzele wonke umuntu okuhle.
-Kasiqhelelane nobugebengu banoma yiluphi uhlobo.
-Kasibambane siyimindeni eyahlukene, kungabi bikho ozwa ubuhlungu yedwa, ojabula yedwa, nongumtshingo ubethwa ngubani.
-ISILO sihlale sigcizelela ukuthi aMakhosi ayizinsika zesizwe futhi uHulumeni kufanele usebenzisane nawo ukuze sakhe isizwe.
-Okunye okubalulekile okuhlale kugcizelelwa yiSILO ukuthi kufanele siphinde esikweni lokusiza isizwe singabheke nzuzo.
UHlanga Lomhlabathi luhlale lugcizelela ukuthi kufanele silime singabi yizigqila zoplastiki basezitolo siyothenga nalokho esingazilimela khona. Isizwe saKwaSanguye silahlekelwe nguMholi oqotho. Sikhalisana noNdlunkulu kanye naBantwana bonke beNkosi. Sithi sonke silahlekelwe kodwa nina nilahlekelwe kakhulu ngokuhamba kukababa obeninikeza imfudumalo.
USibiya usebenza kwezokuxhumana eHhovisi leZokuthuthukiswa Komnotho, Ezokuvakasha kanye Nezemvelo